2 Petro 1 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Tsamba Yechipiri yaPetro 1:1-21
Shandai kuti musarasikirwe nekudanwa kwenyu (2-15)
Zvinhu zvinofanira kuwedzerwa pakutenda (5-9)
Kuwedzera kuvimba neshoko reuprofita (16-21)
1 Simoni Petro, muranda uye muapostora waJesu Kristu, kune vaya vava nekutenda kunokosha sekwatiinako, kwatakawana kuburikidza nekururama kwaMwari wedu neMuponesi wedu Jesu Kristu: 2 Wedzerwai nyasha nerugare kuburikidza neruzivo rwakarurama+ pamusoro paMwari naJesu Ishe wedu, 3 nekuti kuburikidza neruzivo rwakarurama pamusoro paiye Mwari akatidana achishandisa kubwinya kwake nekunaka kwake, simba raMwari rakaita kuti tive nezvinhu zvese* zvinoita kuti tive neupenyu uye tizvipire kwaari.+ 4 Achishandisa zvinhu izvi, akativimbisa* zvinhu zvinokosha uye zvakakura chaizvo,+ kuti kuburikidza neizvi, muve vanhu vakaita saMwari,+ sezvo makabva pakuora kuri munyika kunokonzerwa nezvido zvakaipa.* 5 Nekuda kweizvi, shandai nesimba renyu rese+ kuti muwedzere kunaka pakutenda kwenyu,+ pakunaka kwenyu ruzivo,+ 6 paruzivo rwenyu kuzvidzora, pakuzvidzora kwenyu+ kutsungirira, pakutsungirira kwenyu kuzvipira kuna Mwari,+ 7 pakuzvipira kwenyu kuna Mwari kudanana kwazvo sehama, pakudanana kwazvo sehama kuda vanhu vese.+ 8 Nekuti kana zvinhu izvi zviri mamuri uye zvichifashukira, zvichaita kuti murege kuva vanhu vasingaiti basa kana kuti vasina zvibereko+ pakushandisa ruzivo rwakarurama pamusoro paShe wedu Jesu Kristu. 9 Nekuti munhu asina zvinhu izvi ibofu; anotsinzinya maziso ake kuti asaona chiedza,*+ uye anenge akanganwa kucheneswa kwake pazvivi zvake+ zvekare kare. 10 Saka hama, wedzerai kushanda nesimba kuti musarasikirwe nekudanwa+ uye kusarudzwa kwamakaitwa, nekuti kana mukaramba muchiita zvinhu izvi hamungazombowi.+ 11 Izvi ndizvo zvichaita kuti muwane chikomborero chikuru chekupinda muUmambo husingaperi+ hwaShe wedu uye Muponesi wedu Jesu Kristu.+ 12 Izvi ndizvo zviri kuita kuti ndide kugara ndichikuyeuchidzai zvinhu izvi, kunyange zvazvo muchizviziva uye makadzika midzi muchokwadi chamuinacho. 13 Asi ndinofunga kuti zvakanaka kuti ndikukurudzirei nezviyeuchidzo,+ chero bedzi ndiri mutebhenekeri ino,*+ 14 sezvo ndichiziva kuti tebhenekeri yangu yava pedyo nekubviswa, sezvandakaziviswawo zvakajeka naIshe wedu Jesu Kristu.+ 15 Ndichagara ndichiita zvese zvandinogona kuti pashure pekunge ndaenda, mukwanise kuyeuka zvinhu izvi mega. 16 Hatina kukuzivisai simba raShe wedu Jesu Kristu uye kuvapo kwake tichitevera ngano dzakanyatsorukwa, asi takazvionera tega ukuru hwake.+ 17 Nekuti iye akagamuchira kukudzwa nekubwinya kubva kuna Mwari Baba, kubwinya kukuru pakwakamuzivisa mashoko aya ekuti: “Uyu ndiye Mwanakomana wangu, wandinoda, wandafarira.”+ 18 Chokwadi, mashoko aya takaanzwa achibva kudenga patakanga tiinaye mugomo dzvene. 19 Saka takawedzera kuvimba kwatinoita neshoko reuprofita, uye muri kuita zvakanaka nekuteerera shoko racho, iro rakaita serambi+ rinovheneka munzvimbo ine rima, imo mumwoyo menyu, (kusvikira ava mambakwedza uye nyeredzi yemangwanani+ yabuda). 20 Nekuti kutanga munoziva izvi, kuti hapana uprofita huri muMagwaro hunobva pakududzira kunongoitwawo nemunhu zvichibva mumusoro make. 21 Nekuti hapana kana pakamboziviswa uprofita huchibva mupfungwa dzevanhu,+ asi vanhu vakataura zvichibva kuna Mwari, vachitungamirirwa nemweya mutsvene.+
^ Kana kuti “rakatipa zvinhu zvese pasina mutengo.”
^ Kana kuti “akativimbisa pasina mutengo.”
^ Kana kuti “neruchiva.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “ibofu uye maziso ake haaoni zviri kure.”
^ Kana kuti “mutende rino,” kureva muviri wake ari panyika.